रक्सी धेरै पिएपछि ‘ह्याङओभर’ किन हुन्छ ? « Janata Samachar
काठमाडौं । नयाँ वर्ष आइसकेको छ । पार्टीहरू चल्दैछन् । रक्सीका गिलासहरू एक अर्कासँग ठोक्किँदैछन् । कुनै आफन्तसँग त कुनै साथीहरूसँग । अलिकति धेरै नै पिइँदैछ होला ।
मानिसहरू यसलाई धेरै पिएपछि भएको ह्याङओभर हो भन्छन्। हिलसा माछाको अचार खानु, अण्डा खानु वा ओएस्टर खानु, ह्याङओभर हट्छ पनि भन्छन्। अधिक रक्सी पिएपछि प्राय : मानिसहरू ह्याङओभर भएको बताउँछन्। तर कुन उपायले तपाईँलाई ताजा बनाउला ? त्यस्तो कुनै उपाय छ कि छैन ?
कडा रङ्गका रक्सीमा यसको मात्रा बढी हुन्छ। त्यसैले बर्बन पिउँदा उत्तिकै भोड्का पिएभन्दा बढी ह्याङओभरको अनुभूति हुन्छ। तर यसको असर व्यक्तिपिच्छे फरकफरक हुन्छ। साथै पिउनुको असर वा ह्याङओभर पनि पिउने मानिसको उमेर र पिएको मात्रा अनुसार भिन्न हुन्छ। एजेन्सी
७३ वर्षीया वृद्धाले आफ्नो विवाहका लागि दुलाहा खोज्न विज्ञापन छपाइन्
एजेन्सी । भारतको कर्नाटकी एक ७३ वर्षीया महिलाले आफ्नो विवाहका लागि दुलाहा खोज्दै विज्ञापन छपाएकी
एजेन्सी । उत्तर कोरिया चमत्कारपूर्ण कानून र मिसाइलहरुको परीक्षणका कारण विश्वभर प्रसिद्ध छ । यहाँ
बेहुली आफ्नै बहिनी परेपछि…
एजेन्सी । चीनको जिआनग्सू प्रान्तको सोझोउमा भएको एक विवाहमा आफ्नै बहिनी बेहुली परेको घटना सार्वजनिक
बाँझो जमिन खन्दा अमूल्य खजाना भेटियो, किसान मालामाल
एजेन्सी । सुनका गहना भेट्ने जोकोहीको चाहाना हुन्छ । तर अत्यन्तै कम भाग्यमानी मानिसलाई मात्र